Hanti dhowraha oo shaaca ka qaaday lacago la la’yahay iyo xaalka Villa Somalia | SMC
Home WARARKA MAANTA Hanti dhowraha oo shaaca ka qaaday lacago la la’yahay iyo xaalka Villa...
Hanti dhowraha oo shaaca ka qaaday lacago la la’yahay iyo xaalka Villa Somalia
Sida ku qoran warbixinta xafiiska hanti dhowrka qaranka waxaa jira 17 hey’ad oo dowladda federaalka ah ka tirsan oo ay ku jiraan xafiiska madaxweynaha, xoogga dalka, NISA, maxkamadaha, xeer ilaaliyaha iyo dhowr wasaarad oo aan xisaab celin laga heyn 2019-ka.
Dhanka kale, waxaa barista hanti-dhowrka lagu odaagay in aan xisaab celin loo heyn $1.8 Milyan Dollar kaas oo ay bixiyeen beesha caalamka, halka hey’adaha dowladda federaalka ah ee la baaray oo ay ku jiraan xafiiska ra’isul wasaaraha, golaha shacabka iyo wasaaradda dowladda lagu ogaaday in aan laheyn caddeymaha meesha ay ku baxeen lacago dhan US $5,305,364.48
Haddaba, Halkan hoose Ka Akhriso, Faahfaahinta Lacagaha Loo Waayey Caddeymo ama wax xisaab celin ah.
Xafiisyadan hoose oo uu baaris ku sameeyey hanti-dhowrka qaranka 2019-kii, waxaa uu sheegay in lacago ay bixiyeen iyo dakhli ay qabteen aaney keenin wax xisaab-xir isla markaana aan loo heyn cadameymo halka ay ku baxeen.
Akhriso Faahfaahinta Xafiisyada:
Waxaa baarista hanti-dhowrka qaranka lagu sheegay in la ogaaday bixinta lacag dhan US $747,865.00 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Warbixinta Hanti-dhowrka ayaa sheegya in aqalka sare uu bixiyey $51,000.00 bilihii February, April, June iyo July 2019 taas oo aan lahayn caddeymo ku filan sida; codsiga lacag bixinta ee bukaanka, foomamka ama warbixinta caafimaad, warqadaha qaansheegashada iyo lacag qabashada. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Xafiiska Ra’isul wasaaraha:
Dhankiisa, xafiiska ra’isul wasaaraha waxaa uu bixiyey $163,806.49 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda:
Baarista Hanti-dhowrka waxaa ku jirta in la bixiyey lacag dhan US $399,559.40 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Hanti-dhowrka waxaa uu sheegayaa in ay bixisay lacag dhan US $89,573.00 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Warbixinta Hanti-dhowrka waxaa ku xusay iney bixisay lacag dhan US $448,771.00 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Wasaaradda arrimaha gudaha:
Qoraalka Hanti-dhowrka waxaa lagu sheegay in la bixiyay lacag dhan US $215,900.00 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta:
Wasaaradda awqfaata iyo arrimaha diinta ayaa qabatay dakhli dhan $1,742,100 kaasi oo aan lagu darin xisaabta.
Waxaa baarista Hanti-dhowrka lagu ogaaday in la bixiyay lacag dhan US $17,800.00 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Waxaa barista xafiiska Hanti-dhowrka qaranka lagu ogaaday in la sameeyey lacag bixin dhan US $3,797.00 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan. Lacagahaas ma lahayn caddeymo dhammaystiran oo laga rabay
Hanti-dhowrka qaranka, warbixintiisa waxaa uu ku sheegay lagu ogaaday in la bixiyay lacag dhan US $98,984.00.00 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Wasaaradda amniga gudaha:
Isla baarista waxaa lagu odaagay in la bixiyay lacag dhan $409,408.00 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Hanti-dhowraha waxaa uu sheegay in baarista wasaaradda waxbarahada lagu ogaaday in la bixiyay lacag dhan US $17,845.20 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Waxaa baarista Hantidhowrka lagu ogaaday in la bixiyay lacag dhan US $251,282.00 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha
Baaris uu Hanti-dhowrka ku sameeyey hey’adda Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha in la bixiyay lacag dhan US $195,065.00 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Xafiiska Xisaabiyaha Guud:
Waxaa baarista lagu ogaaday in la bixiyay lacag dhan US $381,520.00 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Waxaa baarista lagu ogaaday in la bixiyay lacag dhan US $71,088.39 iyada oo aan lahayn caddeymo ku filan taas oo lid ku ah sharciga. Arrinkan ayaa sababay in la xaqiijin waayo sax ahaanshaha lacag bixintan.
Hey’adaha aan soo gudbin xisaabcelin
Xafiiska Madaxweynaha :
Waxaa baarista xafiiska Hanti-dhowrka qaranka lagu ogaaday in Xafiiska Madaxweynaha uusan lahayn habraaca iyo siyaasadda lagu maamulo hantida taas oo adkaysay ama suuragalin wayday in la xaqiijiyo ama la qiimeeyo shuruuradaha ama waxa ay hay’addu u isticmaasho guud ahaan maamulka hantida.
Dhanka kale, Hey’adaha hoose waa kuwa aan soo gudbin xisaab celin inta ay socotay baarista hanti-dhowrka, waxaa kale oo qoraalka ku jirtay in qaarkood ay bixiyeen lacago, galeenna heshiisyo aan waafaqsaneyn sharciga maaliyadda, lagana soo celin xisaab-xir.
Xafiiska xeer ilaaliyaha guud
Wasaaradda gargaarka iyo maareyta musiibooyinka
Guddiga madaxabbaan ee doorashooyinka qaranka
Hey’adda Duulista rayidka iyo saadaasha hawada
Wasaradda ganacsiga iyo warshadaha
Previous articleDhageyso:-Taliyaha xoogga oo Al-Shabaab ku eedeeyay Saraakiishii la dilay
Next articleItoobiya oo gargaar u direysa caasimadda Tigray